I-Berghaus Knonwagen, (Fridingen), igumbi elilala abantu ababini elineshawa nendlu yangasese - I-Airbnb
I-Berghaus Knonwagen, (Fridingen), igumbi elilala abantu ababini elineshawa nendlu yangasese
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguTheresia - Lohospo
UTheresia - Lohospo unezimvo eziyi-1809 zezinye iindawo.
Igumbi eliphindwe kabini elineshawa kunye nendlu yangasese
Igumbi elilala abantu ababini elitofotofo elinebhalkhoni. Igumbi linebhedi elala abantu ababini, idesika nendawo yokuhlala. Ukusuka ebhalikhoni unokonwabela ukubona indawo entle yasemaphandleni. Igumbi lokuhlambela lineshawa nendlu yangasese.
E-Fridingen kwi-Danube, i-Berghaus Knopliday yethu isembindini wendalo. Ukuba uyakuthanda ukukhululeka, le yindawo omele ube kuyo. Le ndlu enetreyini elangeni, iyibona kakuhle iDanube Valley. Isidlo sakusasa se-buffet siyafumaneka qho kusasa. Emva koko, unokuqesha ibhayisekile okanye ubuke indawo uhamba ngeenyawo kwiindlela zokunyuka intaba. Kwivenkile yethu yokutyela engaphakathi endlini (nceda uqaphele iintsuku zokuphumla) unokutya okumnandi ngokuhlwa okanye uphumle kwindawo yethu esetyenziswa ngumntu wonke.
Indawo yokupaka engabhatalelwayo iyafumaneka kwaye i-WiFi iyafumaneka kuyo yonke indlu. Kubantwana kukho indawo yokudlala yabantwana.
Entsha ukususela ngoMeyi 2019: i-spa encinci ene-sauna, indlu yamaplanga enomkhenkce, ipuli encinci yokuphumla kunye nendawo enkulu enelanga.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-1 809 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Umbuki zindwendwe ngu- Theresia - Lohospo
Izimvo eziyi-1 809
Enkosi ngokufumana indlela yakho eya kuthi ngaphambi kokuba uhambe, siza kwabelana nawe ngento encinci ngathi. Sisebenza njenge-arhente yabalamli kwaye ke asinguye umbuki zindwendwe wakho ngqo. Sixhasa unxibelelwano olukhoyo phakathi kwakho nombuki zindwendwe wakho ngokuthumela inkcazelo yokuqhakamshelana emva kokubhukisha kwaye siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onayo. Ngoko ke akukho nto imi ngendlela yokuhlala kwakho. Iqela lakho
Enkosi ngokufumana indlela yakho eya kuthi ngaphambi kokuba uhambe, siza kwabelana nawe ngento encinci ngathi. Sisebenza njenge-arhente yabalamli…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fridingen